theZOMI: [moemakadaily@moemaka.biz] 9th March - MoeMaKa Daily
[moemakadaily@moemaka.biz] 9th March - MoeMaKa Daily
မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) Photo Credit: Popular
မြန်မာဗျည်း ၃၃-လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း ပြောရာမှာ ဗျည်းရော သရရော မြန်မာအက္ခရာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာက စပြောဖို့လိုမှာပေါ့။
မြန်မာအက္ခရာဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘိစီ ၅၀၀-လောက်က ၇၀၀-ကျော်အထိ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ဗြာဟ္မီ (Brahmi) အက္ခရာက ဆင်းသက်လာကြောင်း ပညာရှင်တွေက မိန့်ဆိုကြတယ်။
ခရစ်နှစ်ဦးပိုင်းလောက်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ အရှေ့တောင်အာရှကို သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ ရွက်လွင့်လာ ရာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အက္ခရာ၊ နီတိကျမ်း၊ ဓမ္မသတ်ကျမ်း စတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေပါလာပြီး အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေမှာ ထွန်းကားတာပါ။
အဲဒီအက္ခရာဟာ မွန်လူမျိုးတွေဆီ အရင်ရောက်ပြီး အဲဒီကမှတဆင့် မြန်မာတွေဆီရောက်တယ်။
မြန်မာတွေက အဲဒီအက္ခရာတွေကို မြန်မာစကားသံတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် လိုအပ်သလို မွမ်းမံအသုံးပြုရာက မြန်မာအက္ခရာ ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
မြန်မာအက္ခရာဆိုရာမှာ ဗျည်းရော၊ သရရော ပါဝင်ပါတယ်။ ဗျည်းတွေကို အမည်ပေးပုံက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဘယ်တုန်းကစပြီး ကကြီး-ခခွေး-ဂငယ်-ဃကြီး-စတဲ့အမည်တွေ ပေးတာလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်ရင် မြန်မာအက္ခရာတွေကို ပေရွက်ပေါ်မှာ ကညစ်နဲ့ အ၀ိုင်းပုံရေးတော့မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ကျောက်စာ စရေးထိုးတဲ့ ပုဂံခေတ်တုန်းကတော့ ခုလို ၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက် မဟုတ်ကြောင်း ပုဂံကျောက်စာတွေကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကျောက်ပေါ်မှာ ဆောက်တို့၊ ဘာတို့နဲ့ ထွင်းရတာမို့ လေးထောင့်ပုံတွေ ထွင်းတယ်၊ မ၀ိုင်းသေးဘူး။ ၀-၀ကလေး ၀ိုင်းဝိုင်းရေး-လို့ ပြောလို့မရသေးဘူး။
ပေပေါ်မှာရေးတော့ လေးထောင့်ရေးရင် အဆင်မပြေဘူး။ ပေရွက်အကြောတွေ စုတ်ပြတ်နိုင်တယ်။
အ၀ိုင်းရေးတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ အဲဒီလိုအ၀ိုင်းရေးတဲ့ခေတ်ရောက်မှ ဗျည်းတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီး အမည်ပေးတာပါ။
ဒီတော့ မြန်မာဗျည်းတွေဟာ မ၀ိုင်းခင်တုန်းက ကကြီး-ခခွေး စတဲ့ အမည်တွေ မရသေးဘဲ က-ခ-လို့ပဲ ခေါ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဗျည်းတွေကိ်ု အမည်ပေးရာမှာ ဂုဏ်အရည်အသွေးအရ အမည်ပေးတာရော၊ ပုံသဏ္ဍာန်အရ အမည်ပေးတာရော တွေ့ရတယ်။ ကကြီး၊ ဃကြီး၊ ဏကြီး၊ ဠကြီး ဆိုတဲ့ အက္ခရာလေးလုံးကို ကြီးလေးလုံး-လို့ခေါ်ကြတယ်။
အဲ ဃကြီး၊ ဏကြီး၊ ဠကြီးတို့မှာတော့ ဂငယ်၊ နငယ်၊ လ(ငယ်) ဆိုတဲ့ အတွဲတွေ ရှိတယ်မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် အကြီးအငယ်ခွဲပြီး အငယ်တွေထက် အရွယ်ပမာဏကြီးတဲ့ အက္ခရာတွေကို ကြီး-ထည့်ပြီး ခေါ်ကြတာပေါ့။
ကကြီးကျတော့ ကငယ် မရှိဘဲ ဘာဖြစ်လို့ ကကြီးလို့ခေါ်ရသလဲလို့ မေးစရာပေါ့။
ဗျည်း ၃၃-လုံးမှာ ရှေ့ဆုံးက ခေါင်းဆောင်ဗျည်းဖြစ်လို့ ကကြီးလို့ ခေါ်တယ်လို့လည်း ယူဆကြတယ်။
ပုံသဏ္ဍာန်က ဂငယ်ထက် ၂-ဆ ကြီးနေလို့ ကကြီးလို့ခေါ်တယ်လို့လည်း ဆိုကြတယ်။
ပုံသဏ္ဍာန်အရ အမည်ပေးတဲ့ဗျည်းတွေကို ကြည့်ပါ။
မွန်ဗျည်း ၃၅ လုံး
အောက်ပိုင်းကခြိုက်(ချိုင့်) နေလို့ ဓ-အောက်ခြိုက်၊
အက္ခရာတချို့ရဲ့ အမည်တွေက ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရိုးရိုးဖော်ပြ တာမဟုတ်ဘဲ ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းအမည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးကသုံးတဲ့ သံလျင်းလို့ခေါ်တဲ့ ထမ်းစင်မှာပါတဲ့ ချိတ်လေးကို ကောက်ကောက်ကလေးမို့ ဋ-သံလျင်းချိတ်၊
ည-ယ-လ တို့ကိုတော့ သာမန်အားဖြင့် အမည် မပေးပေမယ့် လိုအပ်တဲ့အခါ ညကြီး၊ ယပက်လက်၊ လ(ငယ်)လို့ အမည်ပေးပါတယ်။ ဉ ကို ဉ ကလေး၊ ည ကို ညကြီးလို့ ခွဲခြားခေါ်ပါတယ်။
မြန်မာဗျည်း ၃၃-လုံးမှာ ည(ညကြီး) ပဲပါတယ်။
ဉ (ဉ ကလေး) ကိုတော့ အသတ်အက္ခရာအဖြစ်ပဲ သုံးတယ်။
သံယောဇဉ်တို့၊ ၀ိညာဉ်တို့၊ အစဉ်အမြဲ-တို့မှာ သုံးသလိုပေါ့။
ဒီနေရာမှာ ပါဠိဘာသာမှာသုံးတဲ့ ညနဲ့ မြန်မာဘာသာမှာသုံးတဲ့ ညကို ခွဲခြားမှတ်ရမယ်။
ဒါကြောင့် ပုည ကို ပုဉ်+ဉ လို့ အသံထွက်ရတာပေါ့။
ရှေ့က ညကို အသတ်အသံထွက်ရတယ်။ /ပုန်+ညာ့/လို့ အသံထွက်ရတာပေါ့။
ဒီလိုပဲ ပညာ/ပဉ်+ဉာ/ပျင်ညာ။ သုည/သုဉ်+ဉ /သုန်ညာ့၊ လို့ အသံထွက်ရတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ပါဠိမှာ ညဟာ ဉ ၂-လုံးတွဲဖြစ်တယ်။ ဉ ရော၊ ညရော သုံးတယ်။
ရှေ့က ရကို ရကြီး၊ ယကို ယငယ်လို့လည်း ခွဲခေါ်သေးတယ်။ ရကြီးနဲ့ ရငယ်ပေါ့။ လကိုလည်း ဠနဲ့ ယှဉ်ပြီး လငယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
အက္ခရာအမည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာတခုက ဓအောက်ခြိုက်ကို အောက်ကချိုင့်နေလို့ ဓအောက်ခြိုက် ခေါ်တယ်ပြောပြီး ရေးတော့ အောက်က မချိုင့်ပါလားလို့ မေးစရာရှိတယ်။
ပုဂံခေတ် ကျောက်စာတွေမှာ စရေးတုန်းက ဓဟာ အခုလို အောက်က ပိတ်မနေဘူး။ ဗ စောက်ထိုးရေးသလို အောက်ကချိုင့်နေတယ်။
( ဗထက်ခြိုက် ပြောင်းပြန်ပုံစံမျိုးပေါ့။)
ဈ (ဈမျဉ်းဆွဲ) ကို စလုံးယပင့်-ဆိုပြီး မှားသင်တဲ့ ဆရာမကလေးတွေ ရှိတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဈ ဟာ မူလအက္ခရာမှာ သီခြားပုံသဏ္ဍာန် ရှိပါတယ်။ စလုံးကို ယပင့်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘေးက မျဉ်းဆွဲထားလို့ ဈမျဉ်းဆွဲ ခေါ်တယ်လို့ မှတ်သင့်ပါတယ်။ ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ပြည့်စုံပြီထင်ပါတယ်။
Posted by Aung Htet at 10:45 PM0comments
Labels: မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ)
အိပ်ယာကနေ လာလို့ နှိုးတယ် မေမေ ...။
"ချစ်သား ... ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့" တဲ့ ။
"ချစ်သား ... အသင် ဘာမြင်သလဲ" တဲ့ ။
"ကျနော့် နှလုံးသား ကျနော်ပြန်မြင်နေရတယ် သခင်" ။
သူဟာ ငါဖြစ်တယ်" ။
+ "သစ္စာသည်သာ အလှတရား" = ဆရာကြီး ပန်းချီအောင်စိုးပြောခဲ့သောစကား။
Posted by Aung Htet at 9:45 PM0comments
Aung Htet- Burma Humanrights Day postcard (March 13th 2013)
ပန်းချီ - အောင်ထက်
Posted by Aung Htet at 9:42 PM0comments
● ဦးဝင်းတင်ကို မတရားထောင်ချပြီ
အဲဒီနေ့ (၂၈.၆.၈၉) သတင်းစာမှာပဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ သတင်းပါလာပြန်ပါတယ်။ အဖွဲ့ ချုပ်လူငယ်တာဝန်ခံဟောင်း စိုးသိန်းတုို့ သူ့ အမျိုးသမီး မသူဇာတုို့ကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု ပုဒ်မ (၃၁၅) နဲ့ တရားရုံးတင် တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်တုို့ ရန်ကုန်တိုင်းစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင် ဦးငွေလှိုင်တုို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ တရားခံ စိုးသိန်း ကိုဖမ်းဆီးရာတွင် ကာကွယ်ရန် လျှို့ ဝှက်ကူညီပံ့ပိုးမှုပုဒ်မ (၂၁၆) တုို့ တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့မှာ အမှုကြားနာဖို့ ချိန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အမှုစွဲတင်တဲ့နေ့မှာပဲ ဦးငွေလှိုင်ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့မှာ အမှုရင်ဆိုင် ရအောင်လာတဲ့ ဦးဝင်းတင်ကိုလည်း ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်လိုက်ပါတယ်။ ဦးဝင်းတင် တုို့ဦးငွေလှိုင်တို့ကိုစွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မ (၂၁၆) ဆိုတာ အာမခံပေးရမယ့် ပုဒ်မပါ။ ဒါကြောင့် အာမခံလျှောက်ထားတော့ နောက်ထပ် ဇူလိုင် (၆) ရက်နေ့ကို ထပ်ချိန်းပြီး ချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့ရောက်တော့လည်း တရားသူကြီးက ဦးဝင်းတင်တုို့ ဦးငွေလှိုင်တုို့ကို စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မ (၂၁၆) ဟာ အာမခံပေးကို ပေး ရမယ့်အမှုဖြစ်ပေမယ့် အမှုကို လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြပါရှိခဲ့လို့  အများပြည်သူ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အမှုဖြစ်တဲ့  အတွက် အာမခံပေးလိုက်ရင် ဥိးဝင်းတင် တုို့ဦးငွေလှိုင်တို့ရဲ့  လုံခြုံ ရေးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ် ရှိနိုင်လို့ အာမခံမပေးနိုင်ပါလို့  ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..။
ဒါဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ကို အသရေဖျက်တဲ့ အပြင် ဦးဝင်းတင် တုို့ဦးငွေလှိုင်တို့ကို တမင် မတရားဖမ်းဆီးတာပါ..။ဒီအမှုမှာ ဦးဝင်းတင် ဘယ်လောက် များ နက်ရှိုင်း ပတ်သက်မိသလဲ ဆိုတာစာဖတ်တဲ့ သူတွေ သိရအောင် သူတုို့ အစိုးရဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ပဲ ဒီနေရာမှာ တိုက်ရိုက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..။
"တရားခံစိုးသိန်းအား ဖမ်းဆီးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့  က ၄င်းဧ။် ဇာတိဖြစ်သော ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့ နယ် ဟိုင်းကြီးကျွန်းကျေးရွာရှိစိုးသိန်းဧ။် မိဘဖြစ်သူ ဦးစိုးမြင့် တုို့ ဒေါ်ခင်သိန်းမြင့်  တို့ထံ သွားရောက်ပြီး ဖမ်းဆီးဝရမ်းကိုအတည်ပြုဆောင် ရွက်ခဲ့ကြသည်..။ထိုသို့  ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တွင် စိုးသိမ်းဧ။် ဘခင် ဦးစိုးမြင့်  သည် ၄င်းဧ။် သားစိုးသိန်း ပြစ်မှု ဖြစ်ပွါးသဖြင့်  ၀ရမ်း ထုတ်ထားခြင်းအား မေးမြန်းစုံစမ်း ရန် (၁.၅.၈၉) ရက်တွင် ပုသိမ်မြို့ ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ရုံးသို့  သွားရောက်ခဲ့ပါသည်..။
ထို ရုံးမှ တဆင့်  ရန်ကုန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး သို့  ဖုန်းဆက်မေးမြန်းရာ တဖက်ဖုန်းမှ ဦးဝင်းတင် ဆိုသူက စိုးသိမ်း တနေရာတွင် ရှိကြောင်း၊စိုးသိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်အေး လက်အေးထားရန်နှင့်  ဘာမျှ မပူရန် ၊စိုးသိန်းနှင့်  ပတ်သက်ပြီး အဖွဲ့ ချုပ်ဧ။်
တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်..။
ထို့ ကြောင့်  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်မှဦးဝင်းတင်သည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ၃၁၅ ဖြင့်  ပြစ်မှုကျူးလွန်သဖြင့်  ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ထားခြင်းခံရသူ စိုးသိန်းအားဖမ်းဆီးရမိနိုင်ခြင်း မရှိစေရန် အတွက် သိလျှက်နှင့်  ထိုသူအား ဖမ်းဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကြံဖြင့် လက်ခံထိန်းထားကြောင်း။ ၄င်းဧ။် ပြောဆိုချက်အရပေါ်ပေါက် ခဲ့သဖြင့်  ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၂၁၆) အရ အရေးယူရန်
တရားစွဲဆို တင်ပို့ ခြင်း ဖြစ်သည်" ဟု သတင်းစာမှာ ပါပါတယ်..။
ဒီ စာပိုဒ် သုံးပုဒ်မှာ ဒုတိယ စာပိုဒ် အဆုံးကိုပြန်ကြည့်ပါ..။ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည် ...လို့ ဆိုတော့ ဒါဟာ စိုးသိန်းရဲ့  အဖေ ဦးစိုးမြင့်က ပြောလို့ သိရတယ်..လို့ အဓိပါယ်ရပါတယ်..။ဒီတော့ ဦးစိုးမြင့်က ပြောတာသာဖြစ်ပြီး တဖက်က ဦးဝင်းတင်က ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ်မသေချာပါ..။ နောက်တချက်ကတဖက်က တယ်လီဖုန်းဖြေကြားသူဟာ ဦးဝင်းတင် ဟုတ်သလား၊မဟုတ်သလား..ဘယ်လို
ဒီလို မရေမရာ တုို့ ဦးဝင်းတင်ကို အမှုထဲပါအောင် ရဲက ဆွဲထဲ့လိုက်တာပါ..။ဒါမှ မဟုတ် ဦးဝင်းတင်ကို အမှုထဲ ပါအောင် ရဲကို ဆွဲထဲ့ ခိုင်း လိုက်တာပါ..။
အဲဒီ ၁၉၈၉ ဇူလိုင်(၄)ရက်က စလို့  ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သူမတူတဲ့  နှစ်ရှည် ထောင်သက် တမ်းစခဲ့တာပါဘဲ..။ဦးအောင်ကြီးက ထုတ်ပစ်ဖို့  ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံတောင်းဆိုခဲ့တဲ့  လူရှစ်ဦး အနက်ဦးအောင်လွင်က ပထမ၊ ဦးဝင်းတင်က ဒုတိယ ပါသွားပါပြီ..။ဦးအောင်ကြီး ရဲ့စွပ်စွဲချက်ဟာ ထိရောက်ပါပေတယ်..။သူတုို့ န၀တ တုို့ တကြိတ်တည်း တဥာဏ်တည်း လား.။ဒီ့ အပြင် ဘယ်သူ့ပယောဂတွေ ပါသေးလဲဆိုတာ တော့ ရှေ့ လျှောက် တွေ့ လာရဦးမှာပါ..။
အဲဒီ ဇူလိုင် လဆန်းထဲမှာပဲ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းတာကိုကြေညာပါတယ်..။အခန်း(၁၅)ခန်း နည်းဥပဒေပေါင်း (၁၀၆)ခုပါဝင်ပါတယ်..။ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတုို့နည်းဥပဒေတွေ ထွက်လာလို့ ရွေးကောက်ပွဲ တကယ်ကျင်းပဖို့  စိုင်း ပြင်းတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တဘက်ကမတရားအမှုဆင် ဖမ်းဆီးထောင်ချ တာတွေ တုို့ မို့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပချိန်မှာ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့  လူတောင် ကျန်ပါဦးမလား..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ န၀တ ရဲ့  သဘောထားကိုယုံကြည် စိတ်ချပုံ မရပါ..။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကို လည်း ဦးနေ၀င်း လုပ်ရပ်တွေ ဆက်မလုပ်ပါနဲ့..။ဦးနေ၀င်း ရဲ့ သြဇာက လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့  ဒီရက်တွေ အတွင်းမှာ ပြောတဲ့  ဟောပြောပွဲတွေ သတင်းစာ ဆရာတွေ တုို့တွေ့ ဆုံပွဲတွေမှာတိုက်တွန်းလာတယ်..။နောက်ဆုံးတော့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပဲ တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လား။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလား..။တပ်မတော်ဟာ အောင်ဆန်းတပ်လား..။နေ၀င်း တပ်လား လို့  မေးခွန်းထုတ်ရတဲ့ အဆင့်  အထိ ရောက်လာ ပါတယ်..။
(ရေးခဲ့မိသော မှတ်တမ်းများ (၂၀) မှာ "သူခိုး ဓါးရိုးကမ်းသလား" ကို တင်ဆက်ပါမယ်)
Posted by Aung Htet at 9:09 PM0comments
Singing Peacock in Naypyidaw
မိုးမခဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ခ်ျ ကောက်နုတ်ချက်၊ မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၃
နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်တွေကို ဧည့်ခံတဲ့ ဇဘူသီရိခန်းမကြီးထဲက ဒေါင်းရုပ်ပုံစောင်း … တဲ့ ခင်ဗျ။ စောင်းနေတဲ့ဒေါင်းရုပ်လား။ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်နေတဲ့ ဒေါင်းလည်ပြန်လား။ မိုးမခအထောက်တော်တော့ ဒီဒေါင်းမျိုး ခုမှမြင်ဘူးလို့ ရှယ်ပါတယ်။ ယကြာချေတာတော့ ဟုတ်ထင်ပေါင်ဗျာ။ ကျုပ်တို့အဆိုးရ ဒါမျိုး ဘယ်တုံးက လုပ်ဖူးလို့တုန်းဗျ။
Posted by Maung Yit at 8:54 PM0comments
ကမ္ဘာကြီး ကျန်းမာအောင် ၀ုိုင်းဝန်းထိမ်းသိမ်းကြပါစုို့
သရုပ်ဖော်ပန်းချီ - ဆလုိုင်းစွမ်းပီ
ဒီစကြာဝဠာကြီးမှာ လူသားတွေဟာ ဒီကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်မှာပဲ နေထုိုင်ရှင်သန်နုိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကမ္ဘာဂြိုလ်ကုို ဖျက်ဆီးနေတာ လူသားတွေပဲဖြစ်တယ်။
Posted by Aung Htet at 8:38 PM0comments
ငါ့ ပုံရိပ်စစ် သေးသေးလေးကို
ဘယ်သူ့ ကိုမှ မကြည့်ခိုင်းခဲ့ဘူး။
ထောင့်စုံ ဘက်စုံ အနုလုံပဋိလုံ
ကိုယ်တခြမ်းပဲ့ လူတွေ မြင်တယ်
ကိုယ်နှစ်မွှာပူး လူတွေ မြင်တယ်။
ကိုယ်ထည်မရှိ-အရိပ်ပဲရှိတဲ့ လူတွေ မြင်တယ်
ခေါင်းလုံးလုံးမပါတဲ့ လူတွေ မြင်တယ်။
နှဖူးပေါ်မှာ မျက်လုံးတလုံးအပိုပါတဲ့ လူတွေ မြင်သလို
နောက်စေ့မှာ မျက်လုံးတလုံးအပိုပါတဲ့ လူတွေ မြင်တယ်။
ဦးနှောက်ဗလာနဲ့လူတွေ မြင်တယ်။
အသည်းမရှိ- အသက်ပဲရှိတဲ့ လူတွေမြင်သလို
အသည်းကြီးကြီး-အသက်တိုတို လူတွေ မြင်တယ်။
ခေါက်တွန့် ကြေးမုံခုံးခွက်ရှေ့ ရပ်
လုံးဝ ဟာသ မပါလဲ
ကောင်းကင်ကြီးကြားအောင် ရယ်လိုက်မိပေါ့။ ။
Posted by Aung Htet at 8:15 PM0comments
"The Dictator" ဆိုတဲ့ မနှစ်က ထွက်တဲ့ အမေရိကန် ဟာသရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖူးကြမလား.. မသိဘူး..။
ရုပ်ရှင်ဟာ ဝါဒီယာဆိုတဲ့ အာဖရိကမြောက်ပိုင်းက စ်ိတ်ကူးယဉ်တိုင်းပြည်တခုမှာ အာဏာရှင်ကြီးတပါးဟာ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ် အကြွင်းမဲ့ အာဏာနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတာကို အစပြုပြီး ဇာတ်လမ်းကျောရိုးပြုထားတယ်။
ဝါဒီယာအာဏာရှင်ကြီးဟာ ဒီမိုကရေစီဘိုးအေနိုင်ငံကြီးတွေလို့ဆိုကြတဲ့ အနောက်ကမ္ဘာက တိုင်းပြည်ကြီးတွေနဲ့ အမြဲလိုလို အခြေအတင် ကတောက်ကစ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ အဖတိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို အမြဲလိုလို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးစော်ကား ရန်စနေတဲ့ ကိုလိုနီလက်သစ် ဝါဒီ ပြည်ပ အနောက်ရန်သူကို အန်တုနိုင်ဖို့ရာနူကလီယား လက်နက်ဆန်းကြီး ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ချင်နေတယ်။ ဒီလို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစား ကြံစည်ရင်းနဲ့ပဲ ရန်သူ အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ပယောဂကြောင့် နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအား ပေးမှုပိုခံလာရပါတယ်။
ဒီလို နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားတွေလျော့အောင် တရားဝင် ရှင်းလင်ဖို့ အာဏာရှင်ကြီးဟာ ကုလညီလာခံကိုကိုယ်တိုင်တက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောဖို့ စီ စဉ်ပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ လက်ထောက်လူယုံ စစ်ဗိုလ်ကလည်း တိုင်းပြည်ကို အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနာမည်ခံအုပ်ချုပ်ရင် စီးပွားရေး လုပ်စားခွင်တွေပိုတိုးလာကာ သူ့အတွက် ကိုယ်ကျိုးရှာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အာဏာရှင်ကြီးကို ရှင်းထုတ်ဖို့ ကြံစည်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ ကုလ ညီလာခံ ခရီးစဉ်မှာပဲ လက်အောက်က ဗိုလက် အာဏာရှင်ကြီးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး သူကြိုးဆွဲရာကတဲ့ ခပ်ပေါပေါ လူ တူ အာဏာရှင်အတုနဲ့ အစားထိုးကာ သူအကြံအောင်ဖို့ စီစဉ်ပါတော့တယ်။
ပြန်ပေးဆွဲမှုကအောင်မြင်ပြီး အာဏာရှင်အတုကို အစစ်နဲ့ အစားထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ အာဏာရှင် အစစ်ကလွတ်သွားပါတယ်။
လွတ်သွားပြီးနောက်မှာ အာဏာရှင်ကြီးဟာ သူသာ အာဏာရှင်အစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ တက်ကြွလှုပ် ရှားသူလေး တယောက်နဲ့ တွေ့ သံယောဇဉ် ဖြစ်သွားတယ်..။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အာဏာရှင် အစစ်ဖြစ်ကြောင်းသိသွားတော့ ကောင်မလေးက လက်မခံတော့ပါဘူး။
တဘက်မှာလည်း အာဏာရှင် အတု နဲ့ လက်အောက်ဗိုလ်ဟာ ကုလခရီးစဉ် အတွင်း အမေရိကန် နိုင်ငံမှာပဲ ကမ္ဘာ့ မီဒီယာ နဲ့ အနောက်ကမ္ဘာ လူထုရှေ့မှာ ဝါဒီယာဟာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဒီမိုကရစီနည်းကျသာ တိုင်းပြည်မှာ ရှေ့ဆက်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အာဏာရှင်ကြီးက ခွင့်ပြု ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားလုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အခမ်းအနားကို အာဏာရှင်အစစ်က အရောက်လာနိုင်ပြီး သူသာအာဏာရှင်အစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ကာ လက် အောက်က ဗိုလ်ကို ဖမ်းဆီး၊ လက်မှတ်ထိုးရမယ့် သဘောတူစာချုပ်ကိုဆွဲစုတ်ပြီး ဝါဒီယာကို အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ဆက်အုပ်ချုပ်မယ်လို့ ကြွေးကြော်လိုက်တယ်။
သူဆိုနေတုန်းမှာပဲ အခမ်းအနားကို သူ့ရဲ့ ချစ်သူ ဒီမိုကရေစီမလေး ရောက်လာတယ်။ ချစ်သူဒီမိုကရေစီမလေးရဲ့ မျက်နှာမြင်လိုက်တော့ အာဏာရှင်ကြီးလည်း နှလုံးသားတွေ အရည်ပျော်ပြီး သူဟာ ဒီမိုကရေစီကိုချစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်မှာ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်မှာဖြစ် ကြောင်း၊ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောင်း ကြေငြာ ပြန်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ချစ်သူ ဒီမိုကရေစီမလေး ရှေ့ကိုသွားပြီး "ဒီမိုကရေစီရေ.. မင်း.. ငါ့ရဲ့ ဇနီး (အများကြီးထဲက) တယောက် လုပ်မလား.. ဟင်" လို့ မေးတယ်။
မေးခွန်းကို ကြားတော့ ဒီမိုကရေစီမလေးက ငြူငြူစူစူ ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ အာဏာရှင်ကြီးလည်း ကိစ္စကထိပ်ဝရောက်သလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖိတ်လျှံနေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မတားနိုင်.. မဆီးနိုင်တော့ "ဒီမိုကရေစီ" ဆိုတဲ့ မယားတယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ခင်စုံမက် တသက်လက်တွဲဖို့သဘောတူရပါတော့တယ်။
နောင်တနှစ်ကြာတော့ ဝါဒီယာ မှာ လွတ်လပ်၊သန့်ရှင်း၊မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို သမိုင်းဝင်ကျင်းပနိုင်ပါတယ်။ မဲရုံဘေးမှာတော့ စစ်တပ်က တင့်ကားကြီးတွေ ချထားတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့.. ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီ အများနဲ့တန်းတူ ဝင်အရွေးခံတဲ့အာဏာရှင်ကြီးဟာ သန့်ရှင်းစွာနဲ့ပဲ (၉၈.၈) ရာခိုင်နှုန်း မဲ အရေအတွက် ရပြီးနိုင်သွားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အရင် ဂုဏ်ပုဒ် "စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး" ဆိုတဲ့ အခေါ်ရှေ့မှာ "သမ္မတ ဝန်ကြီးချုပ်" ဆိုတဲ့ အခေါ်သစ်လည်း တိုးလာပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ် အရ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့မှာပဲ အာဏာရှင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ "ဒီမိုကရေစီ" ချစ်သူကောင်မလေး နဲ့လည်း တရားဝင် လက်ထပ်ပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးမှပဲ သူ့ ချစ်သူ "ဒီမိုကရေစီမလေး" ဟာ (အမျိုးမသန့်ဘူးလို့သူယူဆနေကျဖြစ်တဲ့) "ဂျူးမလေး" ဖြစ်နေမှန်းသိတယ်။ "ဒီမိုကရေစီ" ကိုချစ်နေပြီဖြစ်တော့ အာဏာရှင်ကြီးက သဘောထားကြီး ခွင့်လွှတ်ပြီး "ဂျူးမလေး"ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း လျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ "ဒီမိုကရေစီမလေး"ကို အားရပါရ ထွေးပွေ့ ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အကျင့်ဆိုတာ ပြင်ရခဲတော့ တဘက်ကလည်း ထုံစံအတိုင်း လက်ဟန်နဲ့ တပည့်တွေလှည့်ပြီး သူ့ရဲ့ ချစ်ဇနီး ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ "ဒီမိုကရေစီမလေး" ကိုသတ်ဖို့ အမိန့်ပေးမိပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် "ဒီမိုကရေစီမလေး" ကို ချစ်ကြည်မဝဖြစ်နေတော့ တကယ်တော့ အဲ့ကိစ္စ အကောင်အထည် မဖော်ဖြစ်ပါဘူး။
ဝါဒီယာ ရဲ့ သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး ဒီမိုကရေစီ ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်တဲ့ နေ့ကို ကမ္ဘာက အားတက်သရော ထောင်ခံ ချီးကျူးကြသလို ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေကလည်း အရောက်လာပြီး မှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။ မီဒီယာ ရုပ်သံမှာဒီမိုကရေစီ လက်ဆက်ပွဲ သတင်း နဲ့ အတူ နောက်ခံပုံရိပ်မှာ လျှပ်တပြက်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ ကမ္ဘာ က အလို ရှိနေတဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်ကြီး တယောက် ပုံကလည်းဖြစ်ချင်တော့.. ပါ သွားပါသေးတယ်။ ဆိုတော့ ဝါဒီယာ ဟာ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ကောင်ကို အရင်ကနဲ့ လက်ရှိ အချိန်ထိ အကာအကွယ်ပေးထားနေကြောင်းလည်းကမ္ဘာက သိခွင့်ရသွားပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဝါဒီယာ က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးသစ် အနေနဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာအသစ်တခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ နိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာ ပန်းလှ နေပါတော့တယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေ နိုင်ငံကြီးတွေ အပါအဝင်ကမ္ဘာ့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကလည်း ဝါဒီယာ နဲ့ စီးပွားတွေလုပ် ဖို့အ ပြေးအလွှား ဝင်လာကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေနဲ့ အညီ ရင်ဘောင်တန်းပြီး တိုင်းသစ် တည်လို့ပြည်သစ် ဆောက် နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း "သမ္မတ ဝန်ကြီးချုပ်" အသစ်ဟာခေတ်သစ်ကမ္ဘာ နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ဆိုပြီး သူ အသုံးပြုတဲ့ကားယာဉ်တန်းအားလုံးကိုတောင် ခေတ်မီမီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးစေမှု ကိုနည်းစေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကိုပဲ သုံးပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် အာဏာရှင်ကြီးဟာ တိတ်တဆိတ် နဲ့ သူ့ရဲ့ နူကလီးယား အိမ်မက်ကိုတော့ဆက်မက်နေဆဲပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့.. ချစ်ဇနီး "ဒီမိုကရေစီမင်းသမီးလေး" ဟာလည်း ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုပဲ မေ့သွားသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခုမှပဲအမြင်မှန်တွေ ရသွားတယ်လို့ဆိုရမလားမသိ.. ခုဆိုရင် သူဟာ အာဏာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီး ကိုယ်စား နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေ နဲ့အင်တိုက်အားတိုက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေ လက်ခံပေးပြီး ဝါဒီယာ မှာလူ့အခွင့်အရေးတွေ တိုးတက်လာပုံ၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ရရှိလာပုံတွေကိုအာပေါင်အာရင်း သန်သန် ကမ္ဘာကို ပြောပြနေပါတော့တယ်။
ဇာတ်လမ်း အဆုံးကိုတော့ "ဒီမိုကရေစီမင်းသမီးလေး" ရဲ့ မီဒီယာ အင်တာဗျူးတခုနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတယ်။
အင်တာဗျူးမှာ.. "ဒီမိုကရေစီမင်းသမီးလေး" ဟာ သူ့မှာ ရင်သွေးလေး လွယ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာ ကို ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဘေးမှာနားထောင်နေတဲ့ အာဏာရှင်ဟောင်းကြီးကလည်း သူ့ရင်သွေးသတင်းကို ခုမှ သိရတော့ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်ကလည်း လွှတ်ကနဲ "မင်း.. သားယောင်္ကျားလေးမွေးမလား..၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးဖျက်ချမလား" ဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းက ဒီမှာတင် အဆုံးသတ်တယ်။
ဝါဒီယာ ပြည်ကြီးဟာ စည်းကမ်းပြည့်ဝ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို ချီတက်နေဟန်ရှိပါတယ်။ အာဏာရှင်ဟောင်း "သမ္မတ
ဝန်ကြီးချုပ်"အသစ်စက်စက် ကလည်း သူ့ရဲ့ အကျင့်ဟောင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတော့ ပြင်နေဟန်တူပါတယ်။ ဝါဒီယာ ဒီမိုကရေစီ ပြည်သစ်ကြီးရဲ့အနာဂတ်ကို ဖန်သားပြင်မှာ ဆက်လက် မရှုစားနိုင်တော့ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်ဟာကိုယ့်ဘာသာပဲ.. အသိဥာဏ် မျက်စိ နဲ့ စိတ်ကူးရှိသလိုမျှော်မှန်းကြည့်ရတော့မှာပေါ့..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝါဒီယာ ဒီမိုကရေစီဟာ အရာရာကို အကောင်းဘက်က မြင်ကြည့်ဖြေစဉ်းစားပေးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ လူတန်းစားတချို့အတွက်ပြည့်စုံကောင်းမွန်နေမှာ သေချာပါတယ်။
ဒီက.. မိုးမခ စာဖတ်သူ.. နဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ် ရော.. ဘယ်လို ထင်လဲ..။
ဝါဒီယာ ဒီမိုကရေစီ ပြည်သစ် ရဲ့ အနာဂတ် ကို မြင်ကြည့် နိုင်မလား..။
လက်တွေ့.. ကမ္ဘာ မှာရော ဝါဒီယာ ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်မျိုး ကိုမြင်မိလား..။
Posted by Aung Htet at 8:10 PM0comments
တော်လှန်ရေးကောင်စီက နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၇၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော "တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်" စာအုပ် စာမျက်နှာ ၅ ၌လည်း -
"နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ယိမ်းယိုင်လာခြင်း၊ စီးပွားရေးပိုမိုသောင်းကျန်းလာခြင်း၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခပိုမို ကြီးမားလာခြင်း၊ သောင်းကျန်းသူများ ပိုမိုထကြွလာခြင်း၊ ပြည်ပအားကိုးသော ပဒေသရာဇ်တို့က ပြည်ထောင်စုကြီးကို ဖြိုခွဲရန် ပြင်ဆင်လာခြင်း စသည့် အဖက်ဖက်မှ အခြေအနေယိုယွင်းပျက်ပြားလာသဖြင့် တပ်မတော်သည် လက်ပိုက်၍ ကြည့်မနေနိုင်တော့ဘဲ သမိုင်းကပေးအပ်လာသော တာဝန်အရ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီကို အဖွဲ့ဝင် (၁၇) ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နိုင်ငံတော်၏ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ ရပါသည်" ဟူ၍ ဖော်ပြထားလေသည်။
"…..ခွဲထွက်နိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ ဟိုဥစ္စာကြီးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ မထားနဲ့တော့။ ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ အာဏာတွေကို နောက်ထပ်ပြီးတော့ တောင်းမယ်။…နည်းနေတယ်လို့ သူတို့ကပြောတယ်။…. အင်္ဂလိပ်တွေရှိတုန်းက… ၉၁ ဌာနဆိုတာ။ ဌာနတွေပေးထားတာက…. ဗမာပြည်က ၉၁ ဌာနဆိုတာကတော့ ကြားလိုက်တော့ ၁၀၀ မှာ ကိုးဆယ်နဲ့တစ်ဌာနဆိုတော့ များနေတယ်။ …ကိုးဆယ်နဲ့တစ်ဌာနက သုညတွေ။ …ခုနစ်ဌာနက တကယ့်အဆီအနှစ်တွေ၊ ဒါ အင်္ဂလိပ်က ကိုင်ထားတယ်။ အဲသလိုဟာမျိုးဖြစ်ချင်ရင် ဖြစ်နေမလား။ …အဲဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ပြော။ ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော၊ ဘယ်၊ ဘယ်ဟာကို လိုချင်သေးတယ်။…. နောက်ထပ်ပြီးတော့ ဘယ်အာဏာပေးပါအုံး၊ ဘယ်ဌာန ပေးပါအုံး။ ဘယ်ဌာနပေးပါအုံး ပြော။ discuss လုပ်မယ်။ discuss လုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်းပဲ။ …သူတို့ကို ပေးလိုက်ရလို့ ပိုသွားတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဗမာက ရှုံးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ အကုန်ပေးမယ်။…. ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ ဥစ္စာကြီးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်တော့…။ ခင်ဗျားတို့ လိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့ Schedule ဆိုတဲ့အထဲမှာ၊ List တွေထဲမှာ နောက်ထပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အာဏာတိုးပေးမယ်။"ဟူသောမိမိ၏သဘောထားကိုပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များအားပြောကြားရန်အစီအစဉ်ရှိခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ အကယ်၍သာ ဦးနုက နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ အတွင်း ဤသဘော ထားကို ပြောကြားမည်ဆိုလျှင် ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း လက်ခံကြဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
"တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျဖို့ လက်နှစ်လုံးသာလိုကြောင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို တင်ပြရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ကို အကြောင်းအကျိုးတင်ပြဖို့ အခြေအနေမပေးခဲ့ရင် ကျွန်တော့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဖြစ်သူကို တင်ပြရမယ်။
သို့သော် ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိမပေးဘဲ ၄င်းတစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ၄င်းကိုယ်ကျိုးအတွက် အာဏာ သိမ်းခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍များ သူပြောသလို တိုင်းပြည်ချောက်ထဲ ကျဖို့ လက်နှစ်လုံးသာလိုခဲ့ရင်၊ ကျွန်တော်တို့ကို ၂ မိနစ်သာ ကြိုတင် အသိပေးပါ။ ကျွန်တော်ချက်ချင်းအာဏသိမ်းလိုက်ပါ့မယ်" ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တာဝန်စတင်ထမ်းောဆင်စဉ်က ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုကိုင်၍ ကျမ်းသစ္စာပြုခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အပေါ်တွင် သစ္စာရှိရမည်သာဖြစ်သည်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင် ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေ (ငြိမ်း) ၏ ဇနီး ဒေါ်သိန်းဆိုင် (စာရေးဆရာမ မမြတ်လေး) မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် အာဏာသိမ်းရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး တန်ယုဆိုင် (ငြိမ်း) ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သော ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (လက်နှိပ်စက်မူ) ကို ၄င်းဇနီးထံမှ တောင်းယူဖတ်ရှုခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်သိန်းဆိုင် နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ယုဆိုင်သည် မောင်နှမ တော်စပ်ပါသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ယုဆိုင် ရေးသားခဲ့သော ယင်းမှတ်တမ်း၌ ဗိုလ်မှူးကြီး တန်ယုဆိုင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းသည် နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ရန် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ကြိုပမ်းခဲ့ရာ ပထမအကြိမ်တွင် နောက်လိုက်အင်အားမရှိ၍ အစီအစဉ်မအောင်မြင် ခဲ့ချေ။ တဖန် ၁၉၅၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၏ သူရဲကောင်းသုံးယောက် ဟု အပြောများသည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီးနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဖေတို့သည် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု နေအိမ် အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကာ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း လာရောက်ပြောကြားရာ၊ ဦးနုက -
"အဲသလို စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ မလုပ်ကြနဲ့လေ။ အာဏာသိမ်းဖို့ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားကြပါနဲ့။ အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာနဲ့ တပ်မတော်ရော တိုင်းပြည်ပါ နာမည်လည်းပျက်မယ်၊ သိက္ခာလည်းကျပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိအစိုးရကို လက်မခံနိုင်ရင် တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးပါမယ်လို့သာ တပ်မတော်က ကတိပေးပါ။ တပ်မတော်ကို အာဏာလွှဲပေး လိုက်ပါ့မယ်။ ဒီလိုအာဏာလွှဲ ပေးဖို့အတွက် ထုံးတမ်းစဉ်လာနဲ့ အညီ လွှတ်တော်ခေါ်လိုက်မယ်။ လွှတ်တော်မှာ ကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးက ထွက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းအား ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်နိုင်အောင် အဆိုတင်ပေးပါမယ်" ဟူ၍ ပြောဆိုကြောင်း၊ သွေးထွက် သံယိုမှုမရှိဘဲ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း သည် သိက္ခာရှိရှိအိမ်စောင့်အစိုးရ အသွင်ဖြင့် အာဏာ ရရှိသွားခဲ့သည်" ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။ စင်စစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းအား အာဏာသိမ်းပိုက် ရန် အစဉ်တစိုက် တိုက်တွန်းခဲ့သူမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း မောင်မောင်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်တပ်အား စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် အဓိက ကြိုးကိုင်ခဲ့သူမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး တို့ပင် ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ပြီးစနိုင်ငံငယ်များနှင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစ နိုင်ငံငယ်များတွင် စစ်တပ်အင်အားကြီးမားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုနိုင်ငံငယ်များ တွင် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဗမာ့တပ်မတော်ကိုလည်း မည်သို့ပြုပြင်လျှင် သင့်မည်ဟူ၍ ပထစ ခေါင်းဆောင်များ နည်းလမ်းရှာဖွေခဲ့ကြကြောင်း၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများအား သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲပေးလျှင် ကောင်းမည် သို့မဟုတ် အငြိမ်းစားပေးလျှင်သင့်လျော်မည်။ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းစစ်တပ်မထားဘဲ အရွယ်ရောက်သူတိုင်းအား စစ်ပညာများ သင်စေ၍ အလှည့်ကျ အမှုထမ်းစေလျှင် အဆင်ပြေမည် တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း၊ ထိုသို့ဆွေးနွေးသောသတင်းသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းထံ သတင်းပေါက် သွားသောကြောင့် တော်လှန်ရေးကောင်စီက အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်ဟု ထင်ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်မှူး အောင် က ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းပြောဆိုချက်မှတ်တမ်းကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်း သုတေသနဌာနက "ကိုယ်တွေ့ပြောကြားချက်များ (၀၁၂၂)" ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည်။
"ကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလုပ်တဲ့အခါ National Service Act ဆိုတာ စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ် ပါလီမန်မှာ တင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ အဲဒီတင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဖေက နယ်တွေမှာသွားပြီးတော့ တပ်တွေကို ပြောတယ်။ …ဒီ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ငါတို့တပ်မတော်ကို ဖျက်ဖို့လုပ်နေပြီ။ …ဘယ်လိုလဲဆိုရင် National Service Act အရ လူတိုင်း လူတိုင်း… ၁၈ နှစ် ပြည့်တဲ့ ကျား မ၊ ၄၅ နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျားမ အားလုံး…. စစ်ပညာမသင် မနေရ ဆိုတာလုပ်မယ်။ ဒီတော့ တပ်က ဘယ်လောက်ထားမလဲ။ …လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ပေါ့လေ။…. ငါးသောင်းထားမယ်။ တော်ပြီ။ …ပိုတဲ့အရာရှိ၊ အကြပ်၊ တပ်သားတွေကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ …ဒီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ကို အစားသွင်းမယ်။… အကြပ်တပ်သားဆိုလည်း… ကျေးရွာကာကွယ်ရေးတို့ ဘာတို့ပေါ့လေ။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတို့ ဘာတို့…. အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့က ဟိုဒင်းဖြစ်တယ်။…. တပ်မောတ်က ပိုလာတဲ့အရာရှိတွေထဲက တချို့က အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပြန်ထည့်မယ်။ ပညာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီ၊ ဒီတပ်ဗိုလ်တွေကို နိုင်ငံခြားမှာ ကျွန်တော်တို့က ပညာထပ်သင်မယ်။ … တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေး အတွက် လိုတဲ့ပညာတွေကိုပေါ့လေ။ … အဲသလို ပညာသင်ပြီးတော့ ဒီတိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက် သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာ၊ အဲဒီ…. National Service Act စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ ဥပဒေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့…. အဲဒီဟာ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ဗိုလမှူးချုပ်တင်ဖေက ပထမဆုံးသူက … တပ်က အရာရှိတွေခေါ်ပြီးတော့ သူရှင်းတယ်။ …တို့တပ်မတော်တော့ အဖျက်မခံဘူး။ ငါတို့က တခုခုတော့ လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို သူပြောတယ်။ … ၀ နယ်ကို ကျွန်တော်တို့သွားတော့… ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရွှေက သူက တိုင်းတပ်မှူး၊ အစ်ကိုကြီးတဲ့ ဒီက အရာရှိတွေက အစ်ကိုကြီးနဲ့ Interview တောင်းတယ်။ …အဲဒီအရာရှိ ၂၀၀ နဲ့ ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ တွေ့တော့ အဲဒီ National Service Act အကြောင်း သူတို့က မေးကြတယ်။ မေးတော့ အဲဒါ ရှင်းပြတယ်။ …ဟ၊ ဒါဆို ကောင်းသားပဲတဲ့။ …. ဒီသူပုန်ရန်ကလည်း အဲဒီအချိန်က …. အေးသွားပြီ။ … ပေါင်းလိုက်လို့မှ ဆိုရင် ၃၀၀၀ ကျော် ၄၀၀၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီ ၃၀၀၀ ကျော် ၄၀၀၀ ကျော်တွေကလည်း သူတို့အနေနဲ့ ပြန်ပြီးတော့…. အလင်းဝင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်။ …အမျိုးသားစစ်ဝန်ထမ်းဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆင့်ဆင့် ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ အဲဒီအရာရှိတွေက ဟာ - ဒါ၊ ကောင်းသားပဲ။ ဒါ တပ်မတော်ဖျက်တာမှ မဟုတ်ဘဲ။ …ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံး တပ်မတော်ဖြစ်အောင်လုပ်တာတဲ့။ …ဒါ လက်ခံစရာအကြောင်းရှိတယ်။ …ဒီဥစ္စာဟာ အိုစီ (O.C – Officer Commanding တပ်မှူး) ကွန်ဖရင့်က ဒီ C.O (Commanding Officer) ကွန်ဖရင့်က နှစ်ကြိမ် တပ်မတော်အရာရှိက နှစ်ကြိမ် သူတို့သဘောတူပြီးသား။ …ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေက ဟိုတုံးက ပုသိမ်သွားပြီးတော့ ရင်ဘတ်ထုပြီးတော့၊ (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး) က တပ်မတော်ဖျက်ပြီ၊ ဟုတ်လား၊ လားရှိုးမှာလည်း တပ်မတော်ဖျက်ပြီ။ တောင်ကြီးမှာလည်း တပ်မတော်ဖျက်ပြီ။ သူက ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်ကနောက်ကလိုက်ရင်း၊ဒီလိုဖြစ်ကြတာ။ ….ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေ ဒီလိုလျှောက်ပြောတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒီစိုးရိမ်စိတ်ရှိချင်လည်း ရှိ…ခွန်ထီးနဲ့တော့ ကျွန်တော်စကားပြောတာပဲ။ … အဲဒီ ခွန်ထီးတို့ဘာတို့ကတော့ အဲဒါတွေ လျှောက်ပြောကြတာပဲ။ … အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာပဲ ဒါပြောတယ်။ … ဆွေးနွေးကြတယ်။ အဲဒါတွေ ပြောတာပေါ့။ ဒါ၊ ဒီ၊ ဖက်ဒရယ်ကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်က …. သူတို့တပ်မတော်ကို ပျက်တဲ့အတွက် ဒါ စိုးရိမ်လို့ သိမ်းတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ … ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုပဲ ယူဆတယ်လေ။ " ဟူ၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ် ၁၂ နှစ်၊ လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရခေတ် ၁၄ နှစ်၊ ၂၆ နှစ်ကာလအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းသည် ထိုစဉ်က ကမ္ဘာတွင်ခေတ်စားနေသော "ဆိုရှယ်လစ်" ဆိုင်းဘုတ်ကို ကောက်ချိတ်ပြီး ရာဇပလ္လင်ပေါ်တက်ထိုင်ကာ အာဏာသုံးရပ်ကို အပြည့်အ၀ ချုပ်ကိုင်၍ မစားရ ၀ခမန်း စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ကာ ဆိုဗီယက်ပုံစံ တစ်ပါတီ ဆိုရှယ်လစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်ထောင်ခဲ့သောကြောင့်သံယံဇာတ ပေါကြွယ်လှသော မြန်မာနိုင်ငံသည် (၄၂) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ၁၉၈၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၉၆) ကြိမ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၄၂ / ၄၂၈) အရ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံ (အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ) စာရင်းသို့ သွတ်သွင်းခံလိုက်ရလေသည်။
တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေများလည်း တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းပျက်စီးလာစဉ်အတွင်း ၁၉၈၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် နိုင်ငံတော်အတွင်း လှည့်လည်သုံးစွဲလျက်ရှိသော ငွေစက္ကူကျပ် ၁၀၀ တန်၊ ကျပ် ၅၀ တန် နှင့် ကျပ် ၂၀ တန် တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ၂၅ ကျပ်တန်၊ ၃၅ ကျပ်တန် နှင့် ၇၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကိုလည်းကောင်း တရားဝင်ငွေအဖြစ်မှ ရပ်စဲလိုက်သောကြောင့် လူထုတရပ်လုံး အထွေထွေမကျေနပ်မှုများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။ ၃၅ ကျပ်တန် နှင့် ၇၅ ကျပ်တန်တို့ကို ထုတ်ဝေထားသည်မှာ ၂ နှစ်သာ ရှိသေးသည။် ထိုစဉ်အတွင်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအချို့နှင့် ကြို့ကုန်းအနောက်ရပ်ကွက်မှ လူငယ်အချို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် "ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး" တပြည်လုံးတွင် အုံကြွပေါက်ကွဲပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။